BQ Aquaris X Pro ကိုထုတ်ယူခြင်း၎င်းတွင်မည်သည့်ပရိုဆက်ဆာပါဝင်သနည်း Snapdragon 626 သို့မဟုတ် Snapdragon 625? | Androidsis
သင်အတော်လေးမကြာသေးမီကပြုလျှင် ကျနော်တို့အသေးစိတ် BQ Aquaris X ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ စကားမစပ်ငါတို့နှုတ်၌အလွန်ကောင်းသောအရသာနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုထားခဲ့တယ်, ယခုငါတို့စပိန်နိုင်ငံစုံ၏ထိပ်တန်း -of-the-range ကို terminal ကိုအတူတူလုပ်ဖို့သွားနေကြသည်။ ဒါကြောင့်မင်းတို့ဒီကိုယူလာတာပဲ အဆိုပါ BQ Aquaris X Pro ကို unboxing Androidsis ၌ကျွန်ုပ်တို့မကြာမီပြုလုပ်မည့် terminal ကိုအလုံးစုံပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းမပြုမီပထမဆုံးဆက်သွယ်မှုဖြစ်သည်။
ထိုအခါငါငါသည်သင်တို့ကိုစွန့်ခွာ BQ မှအကွာအဝေး၏ဤထိပ်အပေါငျးတို့သနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ, ထုတ်ကုန်၏ကန ဦး ဖြည်နှင့်ငါ့လက်၌ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ကိုင်ထားပြီးနောက်ငါ့အတွေ့ကြုံပေါင်း။
1 BQ Aquaris Pro ၏နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ
3 BQ Aquaris X Pro နှင့်ပတ်သက်ပြီးကျွန်ုပ်၏ပထမဆုံးထင်မြင်ချက်များ
BQ Aquaris Pro ၏နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ
ပုံစံ Aquaris X Pro ကို
Processor ကို 626 Ghz တွင် Qualcomm Snapdrogon 2.2 Octa Core (စမ်းသပ်မှုများနှင့် hardware ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအက်ပ်များတွင် Snapdragin 625 အဖြစ်သတ်မှတ်သည်)
ရမ် 3/4 Gb
ပြည်တွင်းသိမ်းဆည်းခြင်း 32/64 Gb Gb နှင့် MicroSd ထောက်ခံမှုသည် 256 Gb အများဆုံးစွမ်းရည်ရှိသည်
နောက်ကင်မရာ 298 MP အာရုံခံကိရိယာƒ / 12 1.8 µm / pixel aperture ပါ ၀ င်သော Sony IMX1.12 - Largan မှန်ဘီလူး ၆ ခု - Dual Tone Flash - အဆင့်ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း autofocus (PDAF) - 6K @ 4fps ဗီဒီယို resolution - ဗီဒီယိုတည်ငြိမ်မှု (Vidhance) - Slow Motion (30p @ 720fps) - Fast Motion နှင့် Time Lapse - Auto HDR - RAW ပုံစံဖြင့်ရိုက်ကူးခြင်း - လက်စွဲစာအုပ် parameter ကိုထိန်းချုပ်ခြင်း - မြင်ကွင်းကျယ်နှင့်ကွဲကွဲပြားပြားပေါက်ကွဲခြင်းညများ
အခြားအင်္ဂါရပ်များ Terminal ၏နောက်ဖက်တွင်သတ္တုနှင့်ဖန်ချောဖြင့်အလှဆင်ထားသောဒီဇိုင်း - terminal ၏နောက်ဖက်ရှိလက်ဗွေရာအာရုံခံကိရိယာ - Smart PA စပီကာ - Bluetooth အတွက် aptX ™နည်းပညာ - ၂ မိုက်ခရိုဖုန်း (ဆူညံသောကင်ဆာ) - FM ရေဒီယို - USB ကြိုးအမျိုးအစား C
စြေး ၎င်း၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင် 359.90 Glaze White model သည်ဤနေရာတွင်4Gb RAM / 64 Gb ROM ကိုဆန်းစစ်သည်
BQ Aquaris Pro စမတ်ဖုန်း
Micro USB Type-C ကြိုး
ဥရောပအမြန် Charge 3.0 ပါဝါ connector ကို
nano SIM နှင့် MicroSD ကဒ်အထိုင်အတွက် Extractor ကလစ်
BQ Aquaris X Pro နှင့်ပတ်သက်ပြီးကျွန်ုပ်၏ပထမဆုံးထင်မြင်ချက်များ
BQ Aquaris X Pro ကိုအလွန်ကောင်းမွန်စွာပြသနိုင်သည့် box နှင့် အစပြု၍ ၎င်းသည်နောက်ပိုင်းတွင်ဖွင့်လှစ်ထားသောစမတ်ကျသည့်အနက်ရောင်သေတ္တာတစ်ခုဖြစ်ပြီးစမတ်ဖုန်းကိုဘေးတစ်ဖက်၌တပ်ဆင်ထားသည်။ Huawei ၏ဆိပ်ကမ်းများနှင့်တူညီသည်။ ဒီ BQ Aquaris X Pro သည်လေးဘက်လုံးတွင်အလှအပကိုလှပစေသည်, နှင့်ကျွန်တော် box ကိုလျှောအဖြစ်မကြာမီကျနော်တို့ BQ Aquaris X Pro ကို၏ unibody ခန္ဓာကိုယ်ဝန်းရံသောလူမီနီယံ၏စိတ်လှုပ်ရှားချောကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
သေတ္တာ၏တင်ပြမှုတစ်ခုလုံးနှင့်၎င်းတွင်ပါ ၀ င်သည့်အစိတ်အပိုင်းများသို့မဟုတ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအားမည်ကဲ့သို့ချထားသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ Micro USB Type-C cable နှင့် power adapter ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိုခေါ်ဆိုနိုင်ပါသလား။ အမှန်မှာ၎င်းတို့သည်မျက်လုံးကျစေရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ စမတ်ဖုန်းအသစ်တစ်လုံးကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ထုတ်ယူခြင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့ခံစားရသောစိတ်လှုပ်ရှားမှု၏အမြင့်ဆုံးအခိုက်မှာ၊ BQ Aquaris X Pro ကို.
ထိုအခိုက်အတန့်၌တွေ့မြင်ရလိမ့်မည် terminal ကို၏နောက်ကျောဖုံးသောပလပ်စတစ်သို့မဟုတ်ဖန်ကဲ့သို့သောပစ္စည်းများနှင့်အတူသတ္တုပစ္စည်းများလှပသောပေါင်းစပ်မိမိတို့အနေဖြင့်ထိပ်တန်းအဆင့်မီတာတစ်ခု၊ အထူးသဖြင့်စပိန်ကုမ္ပဏီ၏ယနေ့အထိအမြင့်ဆုံးသော terminal ကိုရင်ဆိုင်နေသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့နားလည်သဘောပေါက်လာသောအခါကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်နိုင်ငံတွင်စမတ်ဖုန်းများကိုတရုတ်နိုင်ငံတွင်ထုတ်လုပ်ရန်အတွက်ကြွေးကြော်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ လူကြိုက်များစပိန်အမှတ်တံဆိပ်။
၅.၂ လက်မမျက်နှာပြင်နှင့်တိုင်းတာထားသောအတိုင်းအတာများကြောင့်လက်၌အလွန်အဆင်ပြေသော terminal တစ်ခုဖြစ်သည်အကယ်၍ ဖန်သားပြင်အပြင်ဘက်ရှိခလုတ်များနှင့်အသုံး ၀ င်သောမျက်နှာပြင်၏ ၀.၂ သို့မဟုတ်အချို့ဖြစ်ရပ်များမှ ၀.၃ အထိနုတ်ထားသည့် ၅.၂ "အစစ်အမှန်မြင်ကွင်းနှင့်မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိခလုတ်များရှိသည့်အခြားဆိပ်ကမ်းများနှင့်မတူပါက" ဖြစ်သည်။
ငါလေးနာရီလောက်ကြာအောင်ငါပေးထားတဲ့တစ်ခုတည်းသောအရာကအဲ့ဒီအချိန်ကာလအထိငါပေးခဲ့တယ် အဆိုပါ BQ Aquaris X Pro ကို unboxingterminal ကိုသက်ဝင်စေရန်၊ ကျွန်ုပ်၏အကောင့်များထည့်သွင်းခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်အကြိုက်ဆုံးအပလီကေးရှင်းများထည့်သွင်းရန်၊ BQ Aquaris X Pro တွင်ထည့်သွင်းထားသော hardware အစိတ်အပိုင်းများကိုစစ်ဆေးခြင်းသို့မဟုတ်စစ်ဆေးခြင်းအပလီကေးရှင်းအားလုံးတွင်ကျွန်ုပ်၏နောက်ဆုံးထုတ်မျိုးဆက် Qualcomm Snapdragon 626 ပရိုဆက်ဆာကိုကျွန်ုပ်ကြိုးစားခဲ့သည့်စမ်းသပ်မှုအားလုံးတွင်ဖော်ပြသည်။ စတိုင် Aida64, My Device Info, CPU Z နှင့်ကဲ့သို့သော application များက installed processor သည် MSM8953 ဖြစ်သည်၊ Snapdragon 625 ဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်အားဖော်ပြခဲ့သည်။ ဒါထူးဆန်းတဲ့အရာမဟုတ်လား
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် BQ ကငါတို့ကိုလိမ်တယ်ဆိုတာသံသယကိုဖယ်ထားပါ။ သံသယရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုအမြဲတမ်းစွန့်လွှတ်ရမယ်။ ပြီးတော့ငါကြိုးစားခဲ့သမျှ applications တွေအားလုံးကိုသွားပြီး Antutu စမ်းသပ်မှုကိုစမ်းသပ်ဖို့စောင့်နေတယ်။ \_ t ၎င်းတို့အားလုံးသည်မှားယွင်းနေသည် (သို့) ခေတ်နောက်ကျနေပြီး Snapdragon 625 နှင့် 626 processor ကို ခွဲခြား၍ မရပါ.
ကျွန်ုပ်ကိုစိတ်ရှုပ်စေရုံသာမကစိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသောဤသေးငယ်သောအရေးကြီးသည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုလျစ်လျူရှုပါကကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့တွင် terminal နှင့်ရှိသည် ကတိထားရာနောက်ဆုံးသတင်းများကိုပေးသည့်အမှတ်တံဆိပ်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ ၀ ိုင်ဖိုင်လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကိုချက်ချင်းသွင်းလိုက်သည်နှင့်စနစ်၏စွမ်းဆောင်ချက်ကိုမွမ်းမံခြင်းအပြင်နောက်ကင်မရာ၏အာရုံစူးစိုက်မှုကဲ့သို့သောရှာဖွေတွေ့ရှိသည့်အမှားအယွင်းများ မှလွဲ၍ အသစ်ပြောင်းနိုင်သောအသစ်တစ်ခုကိုအကြောင်းကြားစာရခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်သြဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့စွဲဖြင့်ရရှိနိုင်သောနောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းသို့ Android လုံခြုံရေး patch ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ထားသည်။ ကျနော်တို့မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အမှန်တရားဖြစ်ကြောင်းနှင့်ဤသဘောမျိုးအတွက် BQ ကစိုက် !!
ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေအတွက်ငါစမ်းကြည့်လို့ရပြီအချိန်တိုအတွင်းမှာ terminal မှာသူ့မှာပရိုဆက်ဆာရှိတယ်၊ ၂.၂ Ghz ရှိတဲ့ Core ရှစ်ခုနဲ့ ၄ Gb RAM ပါ အမှန်တရားကတော့ကျွန်ုပ် install လုပ်သည့်မည်သည့် application ကိုမဆိုဖွင့်ရန်မြန်ဆန်စွာနှင့်မြန်ဆန်သောခံစားမှုကြောင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားစစ်ဆေးမှုများအတွက်အချိန်မပေးသောကြောင့်ရံဖန်ရံခါပေါ့ပေါ့သောဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဟာ့ဒ်ဝဲစမ်းသပ်ခြင်းဆိုင်ရာအက်ပလီကေးရှင်းတွေ၊ ငါ့ကိုဘယ်တော့မှမအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အက်ပလီကေးရှင်းတွေဘာကြောင့်လဲလို့တွေးမိနေတယ်။ Aida64 သို့မဟုတ် My Device info ကဲ့သို့သောအက်ပလီကေးရှင်းများသည်ထုတ်ကုန်သေတ္တာအတွင်း၌ထည့်ထားသောနည်းပညာသတ်မှတ်ချက်များတွင် Qualcomm Snapdragon 625 အဖြစ်ထည့်သွင်းထားသောပရိုဆက်ဆာကို Qualcomm Snapdragon 626 ဟုဖော်ပြထားသည်, ယင်ကောင်များသည်တရားဝင် BQ ဝက်ဘ်ဆိုက်၌ပင်ငါပြန်လည်စစ်ဆေးခဲ့သည်။ ရက်အနည်းငယ်ပြင်းထန်စွာအသုံးပြုပြီးနောက်ရက်အနည်းငယ်အတွင်း BQ Aquaris X Pro ၏ဗွီဒီယိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကိုကြည့်ရှုရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တိုက်တွန်းလိုပါသည်။
ငါဒီအစီရင်ခံစာများဖြစ်လိမ့်မည်ခန့်မှန်း Snapdragon 626 ပရိုဆက်ဆာသည် Snapdragon 625 ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေခဲ့သည်သွားကြရအောင် MSM8953 Pro ကို ပြောရမယ်ဆိုရင်၊ ဒီဟာ့ဒ်ဝဲစမ်းသပ်ခြင်းနဲ့စမ်းသပ်ခြင်းအက်ပလီကေးရှင်းတွေမှာအချို့သောပsomeိပက္ခတွေဖြစ်စေနိုင်တယ်။
အနည်းဆုံးလာပါ၊ ဒါကကျွန်တော့်အတွက်ဖြစ်ခဲ့တာတစ်ခုတည်းသောရှင်းပြချက်ပါ ငါ BQ ကဲ့သို့သောအမှတ်တံဆိပ်သည်ဥပမာအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုလှည့်စားရန်ကြိုးစားနေသည်မှာ Snapdragon 625 နှင့် overclocked 2.2 Ghz.
လက်ဝဲမှညာသို့ Aida64, Device Info HW, CPU Z အားလုံးသည် Snapdragon 625 အစား Qualcomm Snapdragon 626 ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Bq » BQ Aquaris X Pro ကိုထုတ်ယူခြင်း၎င်းတွင်မည်သည့်ပရိုဆက်ဆာပါဝင်သနည်း Snapdragon 626 သို့မဟုတ် Snapdragon 625?
၎င်းသည် Samsung Galaxy Note 8 ၏နောက်ဆုံးသတ်မှတ်ချက်များဖြစ်သည်